I-SEGA ifuna ukuthola imishini yayo ye-Arcade phakathi kwe- "you-fogs" | Kusuka kuLinux
I-SEGA ifuna ukuthola imishini yayo ye-Arcade phakathi kwe- «you-fogs»
Okudumile Inkampani yaseJapan i-SEGA inomlando omude emhlabeni wamageyimu wevidiyo, ngokukhishwa okuhle nomlando ngemuva kwawo. Sikweleta iziqu ezinkulu neziduduzi, kepha manje sekusimanje ukusebenzisa ngokunenzuzo izinzuzo zobuchwepheshe obusha ezilethwa yikhompyutha yenkungu.
I-Las imishini ye-arcade Zisasebenza kakhulu, futhi abalandeli abanda ngokwengeziwe abahlela kabusha bayakha, babuyise noma basebenzise abanye amaphrojekthi afana ne-emulators ne-Raspberry Pi. Ngalesi sizathu, i-SEGA ifuna ukuthuthukisa lesi sifiso sabasebenzisi abaningi sokuzivuselela ...
IGoogle Stadia, iMicrosoft xCloud, iNVIDIA GeForce Manje, iSony PlayStation Manje,… izinkonzo eziningi zisebenzisa amandla wekhompiyutha yamafu ukuthuthukisa lolu hlobo lwezinhlelo zokuxhumana. ukusakazwa kwamavidiyo. Kepha i-SEGA icabange okuhlukile kule mibono, futhi lokho ukusebenzisa leyo enye inkungu lapho ingxenye yezinsizakusebenza zedivayisi uqobo isetshenziswa lapho idlala khona hhayi kakhulu ukushiya wonke umsebenzi kuseva ekude ...
Umqondo ukuvuselela imishini esevele iphumelele ye-SEGA, ifinyelela kunoma iyiphi idivayisi nanoma yikuphi, inqobo nje uma unedivayisi ehambisanayo exhunyiwe. Kepha kulokhu, kushiya ingxenye yomsebenzi kudivayisi. Ngale ndlela, umthwalo womsebenzi kuseva uncishisiwe kancane futhi ukunciphisa i-lag ongakuthola kwezinye izinsizakalo engizishilo esigabeni esedlule.
Este iphrojekthi isazokuchazwa, kepha kulokho okwaziwa njengamanje, ngeke kudinge i-hardware enamandla kakhulu ukudlala, futhi kungenzeka isebenze ngokusalela okuncane njengoba kulinganisiwe. Okunye ukungaqiniseki ukuthi izoshiya iJapan noma kuzoba ngumsebenzi okhethekile wezwe laseJapan. Kepha ukuphuma, kungaba yindlela enhle yezimo zezifo, ukwazi ukuletha izimoto zokuzijabulisa ekhaya lakho.
Futhi, uma ngokwengxenye ifana nezinsizakalo ezinjengeStadia, futhi baqalisa amaklayenti e-cross-platform, ingajatshulelwa nakuma-Linux distros, noma ku-Android. Yize lokhu kungukucabanga kwami ​​kuphela ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » I-SEGA ifuna ukuthola imishini yayo ye-Arcade phakathi kwe- «you-fogs»
Uhlobo lweFirefox lweFedora selivele lunokusekelwa kokusheshisa ukumiswa kwamavidiyo nge-VA-API